Ego Ole Ka Brothersmụnna Jonas Ruru? - Ntụrụndụ
The Jonas Brothers ’Net Worth Has Us Burnin’ Up-Nke a bụ Ihe You Chọrọ Knowma
Jonas Brothers Net Worth Has Us Burnin Up Here S Everything You Need Know
Mgbe Jonas Brothers kwụsịrị na 2013, Fans gburugburu ụwa (gụnyere onwe m) nọ na-eche ihe ga-eme ha. Site na ọrụ egwu naanị iji sonye Olu, ụmụnna nọ na-arụsi ọrụ ike nke ha. Agbanyeghị, ha sonyere ọzọ n'afọ gara aga ma n'ezie a maliteghachila obi anụrị. Site na ego ha na-agagharị na ọrụ ha na-arụ, nke a bụ mbibi nke uru Jonas Brothers.
1. Kedu uru net jonas brothers?
N'ụzọ dị ịtụnanya, ụmụnna Jonas niile nwere uru dị iche iche dị iche iche site na ọrụ aka ha.
Nick Jonas nwere ọnụọgụ ọnụọgụ kachasị elu n'etiti mmadụ atọ n'ihe dị ka $ 50 nde, dị ka Celebrity Net thtọ . E wezụga ego otu, nke a gụnyere ọrụ naanị ya, ọrụ nkiri na ọrụ ọhụụ ọhụụ dị ka onye ọka ikpe Olu.
Onyinye Joe Jonas dị gburugburu $ 40 nde ekele ikpe ikpe na ime ihe ngosi, yana oge ya na DNCE. Kevin Jonas bara ezigbo uru $ 25 nde , na-ekelekwa maka ọdịdị TV ya nke eziokwu na ụfọdụ ntinye ego dị ukwuu.
john cena ezigbo nwunye
Mariano Regidor / Onye ntinye / Getty Images
2. Ego ole ka ha na enwetara maka egwu ha?
Jonmụnna Jonas gbara ihe na 2005, mana ebilighị ama rue 2007 mgbe ha ghọrọ ụmụ nwoke IT hụrụ n'anya Disney Channel. N'oge mbụ ha na-agagharị dị ka otu ìgwè, ha rere ihe karịrị nde egwu 17 n'ụwa nile, dị ka Mpempe akwụkwọ .
Na Febụwarị 28, 2019, JoBros kwupụtara njikọta ha ma hapụ ya Inwe Obi Begtọ Amalite na kụrụ otu 'ọkpọ.' Ka ọ na-erule oge ọkọchị, ndị otu ahụ mere njem nleta mbụ ha n'ime afọ iri (nke rere ihe karịrị 1 nde tiketi ma mezue $ 100 nde ). Malite na Eprel, ha ga-enwe ngosi nke obibi nke Las Vegas, yabụ obi ụtọ na-aga n'ihu.
Ha gosipụtara ọhụụ n'oge na-adịbeghị anya, 'Ihe Nwoke Nwee' ma kwupụta na ha nwere album na ọrụ , yabụ egwu (na ego ya kwekọrọ) apụtaghị na tebụl n'afọ a.
3. Gịnị banyere ọrụ ndị ha na-arụ?
N'agbanyeghị na ọtụtụ ndị Jonas nwere obi mgbawa mgbe nkewa ahụ gasịrị, Joe na Nick kpebiri ịbanye n'ime ọrụ egwu egwu ha. Ọ bụ ezie na Joe jiri album nke ya pụta Fastlife , ọ bụ ruo mgbe ọ ghọrọ onye na-abụ abụ na ndị otu DNCE ka ọ hụrụ ihe ịga nke ọma na egwu ndị ama ama dịka 'Cake By The Ocean' na 'Kissing Strangers.' Ndị agha ahụ meghekwara Selena Gomez na Bruno Mars na njem.
N'otu oge ahụ, Nick pụtara na album aha ya Nick Jonas na Afọ gara aga dị mgbagwoju anya, na-enye ndị na-egwu egwu dịka 'Chains' na 'Ekworo' nke hụrụ nnukwu ihe ịga nke ọma na eserese. Ọbụna o depụtara $ 16 nde Ọdịnihu Ugbu a na Demi Lovato na 2016.
John Medland / Onye ntinye / Getty Images
4. Ma gịnị banyere ọrụ ha na-eme?
Otu a mere ihe izizi ha mere Hannah Montana tupu ha abanye na fim mbụ ha na Ogige Nkume na Ogige Nkume 2: Njedebe Jam. Ka ọ na-erule 2009, ụmụnna ahụ nwere ihe ngosi Disney nke ha kpọrọ Jonas ma buputa ihe nkiri ihe nkiri 3D (ihe bụ isi na afọ ahụ) nke mere $ 12.5 nde na-emeghe izu ụka.
Ma na mpụga nke atọ, Nick Jonas nwere ọtụtụ ngosipụta. Ọ gbanye ọhụụ Hawaii Ise, Alaeze na Na-ebe mkpu. Ọ pụtakwara na mgbochi dị ka Jumanji: Nnọọ na ọhịa (nke akwụ $ 950 naanị ), Jumanji: Ọkwa Na-esote, Midway na UglyDolls. Onye na-eto eto nke atọ nwere ahụmahụ Broadway, ebe ọ gbasịrị na 25th ncheta nke Ndị Miserables na Etu ị ga-esi nwee ọganiihu na azụmaahịa n’enweghị mbọ.
Ọ bụ ezie na Nick na-egbu egwuregwu ahụ, Kevin kpebiri ịga ụzọ TV. O nwere usoro TV nke ya nke a na-akpọ Nwunye lụrụ Jonas nke sochiri ya, nwunye ya bụ Danielle na ezinụlọ ya (nke nwere ọhụụ pụrụ iche site na Jonas fam). Ọ bụkwa akụkụ nke Ọzụzụ Ndị Na-agụ Aha na kpakpando dika Shawn Johnson, Gilbert Gottfried na Vivica A. Fox.
Akwukwo nke Nick Jonas kesara (@nickjonas) na Aug 28, 2019 na 7:22 am PDT
5. Ha nwere akara ika ọ bụla?
Site na nchịkọta akpụkpọ ụkwụ ya '1410' na nke tequila brand Villa One na John Varvatos, Nick na-achụ ọtụtụ mmekorita. Ewezuga collabs, ọ bụ IG na-akwado eze nwere mmekọrịta mmekọrịta na ụlọ ọrụ dịka Lime Bike, Cigna na T-Mobile.
Ọ bụ ezie na Kevin Jonas bụ onye ezinụlọ karịa n'oge JoBros hiatus, ọ nọ na-arụsi ọrụ ike iwu na ire ụlọ n'okpuru ụlọ ọrụ ụlọ ya, JonasWerner . E wezụga nke ahụ, ọ kwụsịrị Yood ngwa na ọbụna sonyeere egwuregwu oghere na Egwuregwu Philymack (aha ya bụ onye na-emeputa ihe Phil McIntyre) nke gosipụtara egwuregwu mkpanaka nke Demi Lovato na DNCE.
6. Ọ dị mma, kedụ ihe ọzọ ha na-arụ ọrụ?
Ka emechara mwepu ọba ha n’oge na-adịbeghị anya, ha bidoro ihe nkiri akpọrọ Chụso Obi .tọ na Amazon. Ọ na-enyocha ihe ndị JoBros rịgoro na stard, mbibi ha na ezinụlọ ọhụrụ ha.
N’oge na-adịghị anya, ha kwupụtara akwụkwọ na-abịa na shelf na 2020. Ọbara: Ihe ncheta ga-amaba n’ime ime ma nye ndi n’egosi ihe ihe nkiri ahu emetutaghi.
Mgbe anyị na-echere akwụkwọ ahụ, Nick na-emezi ikike ikpe ya ugbu a na oge 18 nke Olu. (Ihe na-atọ ọchị, ọ bụghị JoBro mbụ pụtara na oche uhie. Joe nọ n'oge Olu Australia n'akụkụ Boy George, Kelly Rowland na Delta Goodrem.) Joe na-esekwa ugbu a usoro nke ya na Quibi, ebe ndị Fans nwere ike ịnwe oche ihu n'ihu maka njem njem ya.
mkpụrụ osisi chia n'oge afọ ime
Anyị bụ n'ezie 'Burnin' Up 'maka ọdịnaya ndị ọzọ site na JoBros.
Njikọ: Sophie Turner Achọghị likemụnna Jonas Anya & O Nwere Ezi Ihe Mere
bu aki oyibo di nma maka uto ntutu
mmanụ almọnd maka ntutu daa
uru badam maka ntutu isi
obere edozi isi maka oval ihu nwanyi India
ọgwụgwọ ụlọ iji belata ntutu ihu